About 180,000 Zimbabweans in SA face uncertain future o...
About 180,000 Zimbabweans in SA face uncertain future over ZEP status
Home Affairs offices in Motherwell, Port Elizabeth. The South African government has not yet indicated whether it will renew the Zimbabwe Exemption Permits which lapse in December. (Photo: Joseph Chirume)
The permits were first issued in 2010 under the Dispensation of Zimbabweans Project (ZDP). The programme was renewed in 2014 as the Zimbabwe Special Permit (ZSP) before the ZEP was introduced in 2017.
Home Affairs spokespersons Siya Qoza and David Hlabane have not responded to GroundUp’s queries. DM
Advocate Gabriel Shumba
Dispensation of Zimbabweans Project
Zimbabwe Special Permit